Bisadda kalgacalka leh ee LaPerm | Bisadaha Noti
Bisadda kalgacalka leh ee LaPerm
Sawir - Marylandpet.com
Haddii aad ka mid tahay kuwa ku raaxeysta salaaxidda bisad timo-duuban, leh LaPerm Ma caajisi doontid, laakiin waxa kaa soo horjeedda maadaama uu yahay nin dhogor badan oo guryo badan oo isla markiiba is jecel.
Sidoo kale, caafimaadkiisu aad u wanaagsan yahay Sababtoo ah maahan tartan si aad ah loola dhaqmay aadamuhu, sidaa darteed cimri dhererkiisu waa dheer yahay, inta u dhexeysa 15 iyo 20 sano. Ma rabtaa inaad wax badan ka ogaato isaga?
1 Asalka iyo taariikhda LaPerm
3 Immisa sano ayey bisad LaPerm noolaan kartaa?
4 Dabeecad iyo qofnimo
5 Daryeelka bisadaha LaPerm
5.5 Kalgacal iyo shirkad
6 Waa imisa qiimaha bisadda LaPerm?
7 Sawirro bisad LaPerm
Asalka iyo taariikhda LaPerm
Sawir - Eyeem.com
Asalka bisadan quruxda badan waxay ku taalaa wadanka Mareykanka, gaar ahaan deegaan ay kujiraan bisado nus-baadi ah oo ku noolaa beero ku yaala Oregon ugaarsiga jiirka iyo jiirka kale. Mid ka mid ah qashinka kittens oo leh timo jilicsan ayaa dhashay, qaarna waxaa soo qaaday guur ka kooban Linda iyo Richard Koehl.
Adoo dooranaya oo ka talaabaya bisadahaan timaha leh ee timaha leh wax la mid ah, tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah. J) Haa, Sannadkii 1997-kii ayaa la sameeyay kooxdii ugu horreysay ee Mareykan ah ee loo yaqaan 'LPSA', 2003-dii waxaa loo aqoonsaday inay tahay nooc ka mid ah nafaqeeyayaasha caalamiga ah ee TICA.
Xitaa sidaas oo ay tahay, weli si aad ah looma yaqaan, laakiin waxaa jira durbaanno ka shaqeeya Japan, New Zealand ama England.
Bisadda LaPerm Waa dhogor dhexdhexaad ah, culeyskeedu yahay 4 illaa 6kg. Madixiisu waa ka badan yahay ama ka yar yahay saddex xagal, oo dheguhu kacsan yihiin, indhahana, oo noqon kara yicib, jaalle, dahab, buluug ama cagaar, ayaa si fiican u kala fog.
Su cuerpo waxaa lagu ilaaliyaa lakabka timaha jilicsan oo midab kasta yeelan kara, ha noqdo mid adag, midab midab leh, midable, midab, iwm. Kooftoodu waxay noqon kartaa mid dheer, gaaban ama mid dherer dhexdhexaad ah, laakiin marwalba way jilicsan tahay. Lugaha waa dhaadheer yihiin laakiin si fiican ayey u egyihiin.
Immisa sano ayey bisad LaPerm noolaan kartaa?
Tartanka si aad ah uma maamulin bini'aadamku, waana wax u oggolaanaya inuu ku noolaado in yar 15-20 sano. Laakiin taas si loogu fuliyo xubintaada, waa inaad siisaa taxadar taxaddar leh oo aasaasi ah oo aan hoos uga faalloon doonno.
Sawir - Askideas.com
Jilaagayagu waa mid timo badan oo yaa wuu jecel yahay salaaxida. Ku raaxayso lasocodka bini aadamkaaga adoo daawanaya telefishanka ama seexanaya. Waa aad u deggan, inkasta oo asalkiisa awgiis, kalgacal badan ka sokow, waxay u baahan doontaa jimicsi. Wuxuu jecel yahay inuu eryado xadhkaha, kubbadaha, ama alaabada carruurtu ku ciyaarto sidii ay jiir ugaarsaneysay.
Adoo tixgelinaya tan, waxaa si weyn lagugula talinayaa inaad billowdo maalinta koowaad aad bixiso juguetes oo aad naftaada ku madadaalin karto.
Daryeelka bisadaha LaPerm
Adiga daryeelahaaga ah, waxaa aad loogu taliyaa taas sii cunto tayo sare leh si ay u kobocdo una horumariso si habboon. Sidaa darteed, waxaa la doorbidaa in la siiyo raashin dabiici ah (hilib bakayle, hilib digaag, iwm), ama quudinta aan lahayn badarka maadama kuwani ay yihiin cuntooyinka inta badan xasaasiyada ku leh bisadaha.
Maalin kasta waa inaad dhaaftaa shanlo bisad si aad uga saarto timaha dhintay.
In kasta oo ay tahay bisad deggan, waayo ka fogow caajiska waxay noqon doontaa mid aad muhiim u ah inaad waqti u hurto. Xayawaanku waa inuu sameeyaa jimicsi jireed (ciyaar 😉) qiyaastii 40-60 daqiiqo maalin kasta, oo loo qaybiyay fadhiyo yaryar oo qiyaastii ah 15-20 daqiiqo.
Ka imanaya bisadaha caadiga ah, caafimaadkooda guud waa mid aad u wanaagsan. Weli iyo wali Intaad nooshahay waxaa laga yaabaa inaad qabtid cudur kale, sida hargabka ama ifilada, sidaa darteed mar kasta oo aad ka shakido inuu jiran yahay waa inaad u qaaddaa dhakhtarka xoolaha.
Waxay sidoo kale sahlanaan doontaa inaad u tagto xirfadlaha isaga talaal, dhig microchip-ka oo jooji tuur isaga hadaadan rabin inay caruur dhasho.
Sida bisad kasta oo ku soo biirta qoyska, waxay u baahan doontaa in loola dhaqmo si kalgacal leh. Sidaa darteed, waa ku habboon tahay taas tus sida aad u danaynayso -inad ka badin weydo-isaga oo salaaxaya, u keenaya gasac quud ah oo qoyan waqti ka waqti, oo u ogolow inuu ku qaato inta ugu badan ee suurtogalka ah dhinacaaga. Intaa waxaa dheer, waqti ka waqti waxaad sidoo kale siin kartaa daweynta bisadaha (aan lahayn badar).
Waa imisa qiimaha bisadda LaPerm?
Bisada LaPerm waa xayawaan kuu sahlanaan doonta inaad ka hesho soosaarayaasha marka loo eego dukaamada xayawaanka, maxaa yeelay maahan nooc caan ah oo si gaar ah loo yaqaan. Iyada oo ay taasi jirto, qiimaha eeyaha si xad dhaaf ah uma sarreeyo: qaar 600-700 euros.
Sawirro bisad LaPerm
Maxaad u maleysay bisadda LaPerm? Haddii aad rabto inaad aragto sawirro badan oo ka mid ah xayawaankan quruxda badan, waa kuwan qaar:
Sawir - Cattime.com
Sawir - Pickapaw.com
Wadada buuxda ee maqaalka: Bisadaha Noti » Bisadaha » Bisadda kalgacalka leh ee LaPerm
Javanese, bisadda ugu jecel
Sida loo daryeelo bisad bil jirta